Rakhid bir qaali ah oo foorarinaya qaybo warshad iyo alaableyda ah | Ouzhan
Qaybaha birta ah ee xaashida ah waxaa ka mid ah foorarka, ka shaqaynta beddelaadda xagasha xaashida ama saxanka. Sida foorarsiga saxanka oo ku jira qaab V, U qaab ah, iwm., Qaybaha birta xaashida waa alaabooyin lagu farsameeyo tiknoolajiyada birta xaashida ah. Ma sameyn karno la'aanteed qeybaha birta ah meel walba oo nolosheena ah. Qaybaha birta xaashida waa iyada oo loo marayo birta korontada, bir goynta laser, farsamaynta culus, isku xidhka birta, sawirka birta, goynta plasma, saxitaanka alxanka, duubista duubista, xaashida biraha laalaada, dhinta been abuurka, goynta jet biyo, saxitaanka alxanka.
Qalabka birta ah ee foorarsiga qaybo-saxan saxan bir mashiinnada wax lagu farsameeyo
Birta xaashida waxaa lagu qeexaa: birta xaashida ahi waa geedi socod qabow oo dhameystiran oo loogu talagalay xaashiyaha birta ah (badanaa ka hooseeya 6mm), oo ay ku jiraan xiirashada, feer / goynta / isku darka, laabashada, alxamida, jeexitaanka, kala bixida, iyo sameynta (sida gawaarida gawaarida). Muuqaalkeeda xuska leh waa dhumucdiisuna waa isku mid. Waxyaabaha birta xaashidu waxay leeyihiin astaamaha miisaanka khafiifka ah, xoogga sare, habsami u socodka korantada, qiime jaban, iyo wax soo saar tiro badan oo wanaagsan. Waxay leeyihiin adeegsiyo ballaaran. Falanqaynta birta xaashida ayaa si ballaaran loogu isticmaalay dhinacyada elektaroniga, isgaarsiinta, warshadaha baabuurta, iyo qalabka caafimaadka. Tusaale ahaan, kiisaska kumbuyuutarka, taleefannada gacanta, iyo MP3, biraha birku waa qayb aan lagama maarmaan ahayn. Intaas waxaa sii dheer, waxaa loo isticmaalaa soo saarista qalabka caafimaadka, waxaana sidoo kale loo adeegsadaa gawaarida iyo gawaarida (gawaarida) meydadka, fuselageska diyaaradaha iyo baalasha, miisaska caafimaadka, saqafka dhismaha (dhismaha) iyo codsiyo kale oo badan.
Faa'iidooyinka Shanghai Ouzhan sheet biraha laabaya qaybo otomaatiga
- Yaraynta qallooca
- Dusha sare
- In la ogaado hawlo badan sida kala-goynta, qashin-qubka, nadiifinta, dhaqidda, iwm
- Qaybaha aan caadiga ahayn, geesaha indha la ', godadka, iwm, sida godadka iyo tuubooyinka, waa la nadiifin karaa
- Waqtiga la habeeyay, xawaaraha waxqabadka degdegga ah, hawl fudud oo ammaan ah
- Is-beddelka isbeddelka isbeddelka isbeddelka si loo daboolo baahiyaha kala duwan
Qalabka mashiinka foorarsiga birta birta ah
Waxyaabaha Saxan duudduuban oo qabow, saxan galvanized, bir birta ah, aluminium saafi ah iyo daawaha aluminium, naxaas saafi ah iyo daawaha naxaas ah, tiknoolajiyada farsamaynta dusha sare ee birta
Daaweynta dusha sare Daaweynta dusha sare waxaa loo sameeyaa iyadoo loo eegayo astaamaha alaabta ceeriin iyo shuruudaha macaamiisha si loogu gaaro saameyn qurxoon oo waarta.
Nidaamka ugu muhiimsan Birta xaashida foorarinaysa birta
Xakamaynta tayada Xakameynta Waxyaabaha illaa baakadaha, dhammaan nidaamka isku-duwidda mashiinka cabbiraadda si adag ayaa loo xakameeyaa.
Isticmaalka Processing biraha xaashi ayaa si ballaaran loo isticmaalay qalabka elektarooniga ah, isgaarsiinta, warshadaha baabuurta, qalabka caafimaadka iyo meelaha kale, sida kiisaska computer, telefoonada gacanta, soo saarida qalabka caafimaadka, meydadka baabuurta iyo xamuulka (xamuulka), fuselages diyaaradaha iyo baalasha, Miiska caafimaadka, saqafka dhismaha (dhismaha) iyo codsiyo kale oo badan
Hore: Qaybaha birta xaashida laaban
Xiga: OEM qaybo foorari biraha sheet